Ama-Ranger Pro Archives - Ilungelo Lethu lase-US Lokwazi
Posted on August 31, 2020 by UCarey Gillam
Umgcini wezinkundla zesikole onqobe ukuqulwa kwecala okokuqala ngqa ngezinsolo zokuthi i-Roundup kaMonsanto ibangela umdlavuza ucela iNkantolo Ephakeme yaseCalifornia ukuthi ibuyisele imali eyizigidi ezingama- $ 250 ukhishwa yijaji owalalela icala lakhe kodwa wancishiswa yinkantolo yokudlulisa amacala waba ngu- $ 20.5 million.
Okuqaphelekayo, ukuthi isikhalazo sommangali uDewayne “Lee” Johnson sinomthelela omkhulu kunecala lakhe uqobo. Ummeli kaJohnson unxusa inkantolo ukuthi ibhekane nenguquko engokomthetho engashiya abantu abanjengoJohnson ababhekene nokufa esikhathini esiseduze nemiklomelo yomonakalo omncane kunabanye okulindeleke ukuthi baphile iminyaka eminingi besezinhlungwini nasezinhlungwini.
“Sekuyisikhathi esidlule ukuthi izinkantolo zaseCalifornia zikwazi ukubona, njengoba kwenza ezinye izinkantolo, ukuthi impilo uqobo lwayo inenani nokuthi labo abancisha ngommangali iminyaka yokuphila kufanele benze isinxephezelo ngokugcwele kulowo ofaka isicelo bese bejeziswa ngokufanele,” kusho abameli bakaJohnson babhala esicelweni sabo ukubuyekezwa kwenkantolo ephakeme yombuso. “Ijaji lathi inani elibalulekile empilweni kaMnu. Johnson, futhi ngalokho uyabonga. Ucela le Nkantolo ukuthi ihloniphe isinqumo sejaji futhi ibuyise lelo nani. ”
Ijaji elavumelana ngazwi linye elatholakala ngo-Agasti 2018 lokuthi ukuvezwa kwemithi yokubulala ukhula esuselwa eMonsanto's glyphosate, eyaziwa kakhulu ngegama lomkhiqizo i-Roundup, kwabangela ukuthi uJohnson athuthukise i-non-Hodgkin lymphoma. Ijaji labuye lathola ukuthi iMonsanto yenza ukufihla ubungozi bemikhiqizo yayo ngokuziphatha ngendlela emangazayo kangangokuthi inkampani kufanele ikhokhele uJohnson $ 250 million ngokulimala kwezijeziso ngaphezu kuka- $ 39 million esikhathini esidlule nakusasa sesinxephezelo.
Ngemuva kwesikhalazo esivela kuMonsanto, esathengwa yinkampani yaseJalimane iBayer AG ngo-2018, ijaji lecala lanciphisa u- $ 289 million kuya ku- $ 78 million. IMonsanto idlulise icala ifuna ukulingwa okusha noma umklomelo owehlisiwe. UJohnson wadlulisa icala efuna ukubuyiselwa umklomelo wakhe ophelele womonakalo.
Inkantolo yokudlulisa amacala kuleli cala bese isika lo mklomelo waba ngu- $ 20.5 million, icaphuna iqiniso lokuthi uJohnson kwakulindeleke ukuthi aphile isikhashana nje.
Inkantolo yokudlulisa amacala yehlise umklomelo womonakalo ngaphandle kokuthola kwakukhona ubufakazi "obuningi" bokuthi i-glyphosate, kanye nezinye izithako emikhiqizweni yakwaRoundup, yabangela umdlavuza kaJohnson nokuthi "kwakukhona ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi uJohnson wahlupheka, futhi usazoqhubeka nokuhlupheka impilo yakhe yonke, ubuhlungu obukhulu nokuhlupheka. ”
Icala likaJohnson limbozwe yimithombo yezindaba emhlabeni jikelele futhi beka obala emizamweni kaMonsanto yokukhohlisa irekhodi lesayensi ku-glyphosate ne-Roundup kanye nemizamo yayo yokuthula abagxeki nokuthonya abalawuli. Abameli bakaJohnson banikeze ama-jurors ama-imeyili enkampani yangaphakathi namanye amarekhodi akhombisa ososayensi baseMonsanto bexoxa ngamaphepha wesayensi abhala ghost ukuze bazame ukuxhasa ukusekelwa kokuphepha kwemikhiqizo yenkampani, kanye nezinhlelo zokuxhumana ezinemininingwane yokuhlambalaza abagxeki, nokuqeda ukuhlolwa kukahulumeni ubuthi be-glyphosate, ikhemikhali esemqoka emikhiqizweni kaMonsanto.
Ukunqoba kwecala likaJohnson kukhuthaze ukufakwa kwamaphutha ngamashumi ezinkulungwane zamacala amanye. IMonsanto ilahlekelwe yizilingo ezintathu kwezintathu ngaphambi kokuba ivumelane ngoJuni ukuthi ikhokhe imali engaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi ukukhokhela izicelo ezinjalo ezingaba ngu-10 100,000.
Isivumelwano ngu kusasebenza, kodwa-ke, njengoba iBayer ilwa nendlela yokuvimbela ukumangalelwa esikhathini esizayo.
Engxoxweni, uJohnson uthe wayazi ukuthi impi esemthethweni neMonsanto ingaqhubeka eminye iminyaka eminingi kodwa wayezinikele ekuzameni ukwenza inkampani iphendule. Ukwazile ukugcina ukugula kwakhe kulawula kuze kube manje ngokwelashwa ngamakhemikhali okuvamile kanye nokwelashwa ngemisebe, kepha akaqiniseki ukuthi lokho kuzoqhubeka isikhathi esingakanani.
"Angicabangi ukuthi kukhona inani elizokwanela ukujezisa leyo nkampani," kusho uJohnson.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, I-B-cell non-Hodgkin lymphoma, Bayer, umdlavuza, inkantolo, UDewayne "Lee" Johnson, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, icala, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, I-Ranger Pro, RoundUp, isayensi
Isilingo sokuqala somdlavuza we-Monsanto Roundup Siyaqhubeka
Posted on July 10, 2018 by USusan Lang
Izimangalo Zezimangalo Ezimangalisayo I-Monsanto Efihliwe Umdlavuza Wengozi Weedkiller Eminyakeni Eyishumi, nguCarey Gillam ku-Guardian
Ukukhethwa Kwejaji Lokuqala LikaMonsanto Roundup Ibhulogi kaCarey Gillam
Mayiqale impi. Izitatimende zokuvula zibekelwe uMsombuluko ku ingqophamlando yezomthetho icala okokuqala ngqa elibeka ecaleni leMonsanto kanye ne-Roundup herbicide ngezinsolo zokuthi umbulali wenkampani osetshenziswa kakhulu kungadala umdlavuza.
UDewayne “Lee” Johnson, umgcini wezinkundla zesikole endaweni yaseSan Francisco obesebenzisa uhlobo lweRoundup njalo emsebenzini wakhe, uzobhekana nenkinga enkulu yembewu namakhemikhali ocwaningweni ecaleni okulindeleke ukuthi lingene ngo-Agasti. UJohnson unethemba lokuncenga amajaji ukuthi iMonsanto, ngenyanga edlule eyaba yinkampani ephethwe yiBayer AG, kufanele isolwe nge-non-Hodgkin lymphoma odokotela abathi ishiya amasonto noma izinyanga kuphela ukuthi iphile.
Amacebo omdlalo wasenkantolo ozokwenzeka avele ngesonto eledlule likaJuni njengoba ukukhethwa kwabasizi bejaji kudonsa izinsuku, neMonsanto ifuna ukwenzelela okubanzi phakathi kwabazoba ngamajaji. Amalungu amaningi echibini lamajaji, Ummeli kaMonsanto uthe, evezwe emibuzweni yamajaji ukuthi babheka iMonsanto “njengobubi.” Abanye baze bathi bakholelwa ukuthi inkampani "ibulele abantu," kusho ummeli waseMonsanto etshela iJaji leNkantolo eNkulu yaseSan Francisco uSuzanne Bolanos.
Abameli bakaMonsanto bacaphune izingqinamba ezifanayo lapho befuna ukuqeda ukusakazwa kwabezindaba ngecala, betshela ijaji ukuthi akufanele livumele amakhamera ezindaba ukuthi enze umabonakude ngezehlakalo ngoba ukumenyezelwa "kuzodala ingozi enkulu yokuphepha" kubasebenzi bakaMonsanto kanye nabameli ababhekiswe "Izinsongo eziningi nokuxhumana okuphazamisayo," okuhlobene nokumangalelwa. UMonsanto uthe abasebenzi bathole izingcingo ezisongelayo kanye namaposikhadi athusayo athunyelwe emakhaya abo. Ikhadi leposi elilodwa libonise ugebhezi namathambo ahamba phambili kanye nesithombe somamukeli, Kusho uMonsanto enkantolo.
IJaji UBolanos wabusa ukuthi ezinye izingxenye zecala zizovunyelwa ukusakazwa, kufaka phakathi izitatimende zokuvula, izimpikiswano zokuvala nokumenyezelwa kwesinqumo. Icala kulindeleke ukuthi lilandelwe eduze ngabantu emhlabeni jikelele; iphephandaba laseFrance I-Agence France Presse uphakathi kwabezindaba abebefuna imvume yokubika leli cala.
Izimpikiswano ezishubile mayelana nokuphepha kweRoundup kanye nesithako esisebenzayo se-glyphosate sekunqamule umhlaba iminyaka. Ukukhathazeka kwanda ngemuva kokuthi imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ivele ngokutholakala kwenkantolo, okukhombisa izingxoxo phakathi kwabasebenzi baseMonsanto mayelana "nesipoki" ngokubhala amaphepha athile esayensi ukusiza ukuthonya umbono olawulayo nowomphakathi ngemikhiqizo yeMonsanto.
Amaningi alawo marekhodi ezinkampani angaphakathi kulindeleke ukuthi abe yingxenye ebalulekile ecaleni likaJohnson. Abameli bakaJohnson bathi banobufakazi bokuthi iMonsanto kudala yazi ukuthi imishanguzo yokubulala ukhula esuselwa ku-glyphosate efana ne-Roundup ingumdlavuza futhi ilufihlile lolo lwazi kubathengi nakubalawuli. Basola ukuthi iMonsanto isebenzise irekhodi lesayensi kanye nokuhlolwa kokulawulwa kwe-glyphosate ukuze ivikele izimali ezihlobene ne-glyphosate. UMonsanto wayebazi ubungozi futhi "wenza izinqumo eziqondile zokungakhi kabusha, ukuxwayisa noma ukwazisa umphakathi ongaqaphile," icala likaJohnson izimangalo.
Uma bekwazi ukukholisa amajaji ngalezi zinsolo, abameli bathi bahlela ukucela “amakhulu ezigidi zamadola” okungenzeka babe nawo.
Icala likaJohnson elibhekiswe kuMonsanto liyamenza oyedwa wabamangali abangama-4,000 owamangalela inkampani ngemuva kokuthi i-International Agency for Research on Cancer (IARC) ihlukanise i-glyphosate njenge- kungenzeka i-carcinogen yomuntu ngoMashi 2015. Ukuhlukaniswa kwe-IARC kwakususelwa ekubuyekezweni okungaphezulu kweminyaka eyishumi yezifundo zesayensi ezishicilelwe, ezibuyekezwa kontanga ezihlaziya i-glyphosate ne-glyphosate-based herbicides. Icala likaJohnson ngelokuqala ukuya enkantolo. Okunye kuhlelwe ukuqulwa kwamacala ngo-Okthoba eSt. Louis, eMissouri.
IMonsanto iyaphikisana asikho isizathu sanoma yiziphi izimangalo, futhi iqinisekisa ukuthi inamashumi eminyaka okutholakele okulawulwayo kwezokuphepha kanye namakhulu ezifundo zocwaningo ukusekela ukuzivikela kwayo. "IGlyphosate yisibulala-gciwane esivivinywe kunazo zonke emlandweni," kusho uMonsanto emqulwini wecala lakhe.
Le nkampani ithi ihlela ukwethula ubufakazi bochwepheshe obukhombisa ukuthi isayensi isohlangothini lwayo ngokuqinile— “yonke indikimba yezincwadi zezifo ezithathelana ngezifo ayikhombisi ukuhlangana” (phakathi kwe-herbicides-based based herbicides kanye ne-non-Hodgkin lymphoma, kusho inkampani. Futhi, i-database yokuhlolwa kwezilwane "ihambisana kakhulu ne-glyphosate engeyona i-carcinogen yomuntu," ngokusho kweMonsanto.
Abameli benkampani babuye bahlele ukukhombisa ukuthi ukuvezwa kukaJohnson bekukuncane, futhi ikakhulukazi, ukuthi ukukhula kohlobo lomdlavuza wakhe — isifo esibizwa nge-mycosis fungoides esibangela izilonda esikhunjeni — kuthatha iminyaka eminingi ukwakheka futhi bekungeke kwenzeke esikhathini esifushane. phakathi kokuvezwa kukaJohnson nokuxilongwa kwakhe.
Abameli bakaMonsanto phikisana ezinkantolo ukuthi izimangalo zikaJohnson zibuthakathaka kakhulu ijaji kufanele liyalele ijaji ukuthi linikeze isinqumo esiqondisiwe esivuna uMonsanto.
Kodwa abameli bakaJohnson bahlela ukutshela amalungu ejaji ukuthi uJohnson waqala ukuzwa ukuqubuka kwesikhumba kungekudala ngemuva kokufakwa ngephutha emithini yokubulala ukhula eseMonsanto glyphosate ebizwa ngeRanger Pro. Wabona ukuqubuka - okwaphenduka izilonda kwabe sekuhlasela ama-lymph node — kuya ngokuya kuba kubi kakhulu ngemuva kokusebenzisa ikhemikhali, okwakuthi njalo lapho elapha amagceke esikole. Abameli bakaJohnson bahlela ukutshela abameli ukuthi uJohnson wayekhathazeke kakhulu ngokuthi umuthi wokubulala ukhula wawuyisole ngakho wabiza amahhovisi kaMonsanto kanye nenombolo yocingo olutholakala ku-label ye-herbicide. Abasebenzi baseMonsanto barekhoda ukufinyelela kwakhe nokukhathazeka kwakhe, imibhalo yangaphakathi yeMonsanto ibonisa. Kepha nangemuva kokuhlukaniswa kwe-IARC kwe-glyphosate njenge-carcinogen engaba khona, uMonsanto akazange amazise ngobungozi, ngokobufakazi obabuzokwethulwa ecaleni.
Njengengxenye yecala labo, abameli bakaJohnson bahlose faka imali manje kwabangu-10 ababengabasebenzi baseMonsanto noma abasebenza njengamanje, kanye nalowo owayeyisikhulu se-Environmental Protection Agency uJess Rowland, obudlelwano bakhe neMonsanto buqubule izinsolo zokusebenzisana uphenyo oluvela eHhovisi Lomhloli Jikelele we-EPA. Bazobizela nesitendi uJohnson uqobo, umkakhe, odokotela bakhe, nososayensi abaningana njengofakazi abangochwepheshe.
The Uhlu lofakazi baseMonsanto kufaka phakathi ofakazi abayi-11 abazofakaza bobabili ngesidingo semithi yokubulala ukhula, kufaka phakathi i-glyphosate-based herbicides; izincwadi ezithile zesayensi; uhlobo lomdlavuza lommangali kanye nezimbangela ezingaba khona; kanye nobunye ubufakazi bokuthi uMonsanto uthi bujivaza izimangalo zikaJohnson.
Abameli bakaJohnson bazoqala izitatimende zokuvula ngoMsombuluko, futhi baveze ukuthi incazelo yokuqala yecala labo kwijaji izothatha cishe amahora ayi-1-1 / 2. Abameli bakaMonsanto batshele inkantolo ukuthi balindele ukuthi izitatimende zabo zokuvula zithathe cishe amahora ayi-1-1 / 4.
Le ndaba ekuqaleni yabonakala I-EcoWatch.
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane Bayer, umdlavuza, EPA, glyphosate, IARC, UJess Rowland, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, izibulala-zinambuzane, I-Ranger Pro, RoundUp